बीमा Archives | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - सानिमा लाईफमा बीमा गर्दा शुरुमा नै पाइने भयो ७० रुपैयाँ बोनस
सानिमा लाईफमा बीमा गर्दा शुरुमा नै पाइने भयो ७० रुपैयाँ बोनस
काठमाडौं । सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आफ्नो स्थापनाको पहिलो वर्षमा नै ७० रुपैयाँ बोनस दिने घोषणा गरेको छ । 'सानिमा जीवन श्री' बीमा योजनामा सामेल हुने व्यक्तिलाई सो बोनस लागू हने इन्स्योरेन्सले जनाएको छ । वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा संचालक समितिका अध्यक्ष कुमारप्रसाद कोइरालाले सो योजनाको शुभारम्भ गरेका छन् । गैर आवसीय नेपालीहरुको समूहद्धारा प्रवद्र्धित सानिमा लाईफले सफलतापूर्वक व्यवसायिक कारोवार संचालनको पहिलो वार्षिकोत्सव आज भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । लामो समयदेखि रिक्त स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा रमेशकुमार पोखरेल नियुक्त भएका छन् । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलार्इ सो पदमा नियुक्त गरेको छ । पोखरेल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । उनी खुला प्रतिष्पर्धाबाट छनौट भई अन्तिम ३ मा परेका थिए । लोक सेवा आयोगले गत कार्तिक ६ र ७ गते सो पदका लागि अन्तर्वार्ता लिएको थियो । आयोगले डा.दामोदर बसौला, श्रीमान् कार्की र रमेशराज पोखरेलकोे नाम सिफारिश गरेको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
देवः बिकास बैंक र जनरल ईन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । जनरल ईन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल (जिआईसि नेपाल) र देवः बिकास बैंक लिमिटेडबीच बैंकास्योरेन्स सेवा प्रदान गर्ने सम्वन्धी सम्झौता भएको छ ।इन्स्योरेन्स कम्पनी तथा बिकास बैंकबीच आज आयोजित एक कार्यक्रमबीच सो सम्वन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय बहादुर श्रेष्ठ र इन्स्योरेन्सका महाप्रबन्धक एस्. के.तमोटले सो सम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन । सहमतिसंगै बैंकका ग्राहकले जनरल ईन्स्योरेन्सले प्रदान गर्ने निर्जीवन बीमा सम्वन्धी सेवा सुविधा बैंकका सबै शाखाबाट लिन सक्नेछन ।	थप पढ्नुहोस्
सानिमा जनरल इन्स्सोरेन्स र एनआईसी बैंकबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । सानिमा जनरल इन्स्सोरेन्स र एनआईसी बैंक बीच निर्जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बैंकास्योरेन्स (Bancassurance ) सम्झौता सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्झौतामार्फत सानिमाले आफ्ना थप सेवाहरु बैंककोे विभिन्न शाखा सञ्जालमार्फत प्रदान गर्ने छ । बीमा ब्यवसायलाई विधिकरणसहित प्रवद्र्धन गरी बीमा बजारमा अग्रणी स्थानमा रही गुणस्तरिय सेवा जनस्तरसम्म प्रदान गर्न सानिमा जनरल इन्स्सोरेन्सको तर्फबाट नायव महाप्रवन्धक सुबोधलाल श्रेष्ठ र एनआईसी बैंकको तर्फवाट सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कुमार राथीले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
ललितपुरमा सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको शाखा विस्तार
काठमाडौं । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सले ललितपुर शाखा गरेको छ । कम्पनीका संचालक डा. माणिक लाल श्रेष्ठले उक्त शाखा समुद्धाटन गरेका हुन् । पाटन क्षेत्रमा रहेका उद्योगी ब्यवसायीहरुलाई वीमाको सेवा सर्वसुलभ पुराउने उद्देश्यले यस क्षेत्रमा शाखा विस्तार गरिएको कम्पनीका सहायक महा प्रवन्धक राजु पौडेल जानकारी दिए । कार्यक्रममा कम्पनीका नायब महाप्रवन्धक सुबोधलाल श्रेष्ठ, कम्पनीका सहायक महा प्रवन्धक राजु पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
ललितपुरमा खुल्यो, सानिमा जनरल ईन्स्योरेन्सको शाखा
काठमाडौं । पाटन क्षेत्रमा रहेका उद्योगी ब्यवसायीहरुलाई बीमाको सेवा सर्वसुलभ पुराउने उद्देश्यले आज मिति मंसिर ११ गतेका दिन सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स, ललितपुर शाखा कार्यालयको विधिवत् समुद्धघाटन कम्पनीका संचालक डा. माणिकलाल श्रेष्ठले गरेका छन् । सो अवसरमा कम्पनीका नायब महा प्रवन्धक सुबोधलाल श्रेष्ठ, कम्पनीका सहायक महा प्रवन्धक राजु पौडेलको पनि उपस्थिति थियो । बीमा ब्यवसायलाई विविधिकरणसहित प्रवद्र्धन गरी बीमा वजारमा अग्रणी स्थानमा रही गुणस्तरीय सेवा जनस्तरसम्म प्रदान गर्न सानिमा इन्स्सोरेन्स कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको जनाईएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
बट्टारमा रिलायन्स इन्सुरेन्सको शाखा
नुवाकोट । रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सले आजदेखि नुवाकोटमा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । बट्टारमा बजारमा राखिएको शाखाको नुवाकोट उद्याग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीले उद्घाटन गर्दै जीवन बीमा सबैले अनिवार्य गर्नुपर्ने र यसबाट मृत्युपछिको जोखिम वहन र आफ्नै जीवनकालमा पनि धेरै फाइदा लिन सकिने बताए । कार्यक्रममा इन्सुरेन्सका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निराजन कँडेलले बीमा बजारको क्षेत्र ठूलो भएको र यो व्यापार मात्र नभई सामान्य नागरिकको सेवा समेत भएको बताए । रु दुई अर्ब १० करोड चुक्ता पूँजी रहेको इन्सुरेन्सका हाल ४० शाखा स्थापना भएका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
सर्बोच्चकोआदेश : महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सलाई लाईसेन्स दिनु
काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले दोस्रो पटक महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाईसेन्स दिन आदेश दिएको छ । गत शुक्रबार प्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्र, न्यायधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले समितिको माग खारेज गर्दै महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन जारी गरेको परमादेशलाई निरन्तरता दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले गत असार १४ गते महालक्ष्मी इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन परमादेश दिएको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरुले संकलन गरे आर्कषक प्रिमियम काठमाडौं । गत बर्षमात्र संचालन स्वीकृित पाएका नौवटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले लोभलाग्दो प्रिमियम संकलन गर्न सफल भएका छन् । पुराना जीवन बीमा कम्पनीहरुसँगको चर्को प्रतिस्पर्धा एवं बीमा क्षेत्र बारे आम जनतामा रहेको न्युन सचेतनाको बाबजुद चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नौं वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले सार्वजनिक गरेको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार एक अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी प्रिमियम संकलन गर्न सफल भएका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
एनआईसी एशिया बैंक र अजोड ईन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले अजोड ईन्स्योरेन्स लिमिटेडसँग बैंकास्योरेन्स सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौता अनुसार अब यस बैंकका ग्राहकहरुले मुलुकभर फैलिएको २६६ वटै शाखाहरुबाट सहज रुपमा अजोड ईन्स्योरेन्स लिमिटेडको निर्जीवन बीमा पोलिसीहरु खरिद गर्न सक्नेछन् । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट बैंकका का.मु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपाने र इन्स्योरेन्स कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार बहादुर खत्रीले हस्ताक्षर गरे ।	थप पढ्नुहोस्